कसरी भिडियो GIF मा सजिलै रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, उत्तम विकल्पहरू | ग्याजेट समाचार
पहिले यो ट्वीटर थियो, जुन फेसबुक द्वारा पछ्याईएको थियो, अन्ततः टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा एकीकृत गर्न। को एनिमेटेड GIF हरू भर्खरै लोकप्रिय भएका छन्, र हामी ती दुबैलाई माथि उल्लिखित अनुप्रयोगहरूमा र ईन्टरनेटमा कतै हेरेको फेला पार्न सक्छौं।
याद गर्नुहोस् कि एनिमेटेड GIFaभन्दा बढि केहि छैन फ्रेम उत्तराधिकार एनिमेटेड, अर्को शब्दहरूमा, ध्वनि बिना एक छोटो भिडियो। तर के हुन्छ यदि तपाईं आफ्नै एनिमेटेड GIF सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ भने? यो वास्तवमा जस्तो जटिल छैन जस्तो लाग्छ। तपाईं हिम्मत?
२256 सम्म र colors्गी र स्पष्ट ध्वनि बिना भिन्न आवाज संग र असीम लूप प्लेब्याक संग, lएनिमेटेड GIF सिर्जना गर्न सब भन्दा सजिलो तरीका एक भिडियो हो, र त्यसलाई त्यो ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुहोस्। यस उद्देश्यका लागि त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन्, यद्यपि हामी आफैंलाई सरलहरू मा आधारित छौं।
गिफि मात्र एक हो वेब जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले हाम्रा GIFs अपलोड र साझेदारी गर्न सक्दछन् मनपर्ने कार्टुन। तर, साथै, उनको गोप्य हतियार त्यो हो तपाईंलाई कुनै पनि YouTube भिडियो मार्फत एनिमेटेड GIF सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ सरल र सजीलो।
हामी संग खोजकर्ता पृष्ठको शीर्षमा, जहाँ हामी सर्तहरू प्रविष्ट गर्न सक्छौं जुन हामी एक विशिष्ट GIF खोज्न चाहान्छौं, तर हामी यूट्यूब भिडियोबाट एनिमेटेड GIF पनि सिर्जना गर्न सक्छौं। «सिर्जना गर्नुहोस्» बटनको साथ, शीर्षमा अवस्थित खोज बारको माथि मात्र।
एकचोटि «सिर्जना गर्नुहोस्» बटन थिच्दा, हामी सिधा पृष्ठको तल, अनुभागमा जान्छौं "कुनै पनि URL थप्नुहोस्", कुन पाठ बाकसमा हामी यूट्यूब भिडियोबाट लिंक प्रतिलिपि गर्नेछौं जुन हामी रूपान्तरण गर्न चाहन्छौं। केवल सीमितता यो छ कि मूल भिडियो १ 15 मिनेट भन्दा बढि हुँदैन अवधि एकचोटि ठेगानाको नक्कल गरिएपछि, गिफिले यसलाई सीधा पहिचान गर्नेछ, र सम्पादक खोल्नेछ।
सम्पादक भित्र हामी फेला पार्छौं, क्रममा,aहाम्रो GIF को पूर्वावलोकन बाँया पट्टि, जबकि हामीसँग दायाँपट्टि हुनेछ दुई स्लाइडरहरू, जुन सँगै हाम्रो GIF को अवधि समायोजित गर्न सकिन्छ, र जुन क्षण हामी यो सुरु गर्न चाहन्छौं। एकचोटि दुबै प्यारामिटरहरू समायोजित भएपछि, हामी जारी बटनमा क्लिक गर्नेछौं, तल दायाँ कुनामा अवस्थित।
यो दोस्रो चरणमा, हामीसँग यसको सम्भावना हुनेछ हाम्रो GIF सजाउनुहोस्। हामी पाठ, एनिमेशनहरू, फिल्टर वा स्टिकरहरू थप्न सक्दछौं ताकि अन्तिम GIF हामी खोजिरहेका कुराको लागि बढी उपयुक्त छ। हामीले भर्खरै विकल्पहरू हामीले छनौट गर्न चाहान्छौं, तीन खण्डहरूमा विभाजित गर्दै: पाठ, स्टिकर र चित्र।
एकचोटि हामीले चाहेको सबै कुरा थपियो, बटन थिच्दै Upload अपलोड गर्न जारी राख्नुहोस् » तल्लो दाहिनेपट्टि, हामी अन्तिम चरणमा पहुँच गर्नेछौं। हामीले केवल ट्यागहरू प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ, जुन ती ट्यागहरू हुन् जसद्वारा गिफि सर्च इञ्जिनले GIFs फिल्टर गर्दछ, र बटन क्लिक गर्नुहोस्। Giphy मा अपलोड गर्नुहोस्।
अपलोड प्रक्रिया केहि सेकेन्ड लिन्छ, र एक पटक तिनीहरूका सर्वरमा अपलोड, गिफीले हामीलाई विभिन्न तरिकामा सिर्जना गरिएको GIF साझा गर्न सक्षम हुने विकल्प प्रदान गर्दछ। शक्ति बाहेक यसलाई हाम्रो कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्नुहोस्, तपाईंलाई यो हाम्रो Giphy खाताको मनपर्नेमा बचत गर्न अनुमति दिन्छ, यदि तपाईंसँग एक छ भने। यसले हामीलाई सम्भावना पनि प्रदान गर्दछ यसको सीधा लिंक प्रतिलिपि गर्नुहोस् वा तपाईंको वेबसाइटमा घुसाउनुहोस्, ताकि यो तपाईं तल हेर्नुहोस्:
यसको आकार कम हुनेछ, किनभने एक GIF हो र एक पूर्ण भिडियो होईन, यो एक विशिष्ट आकारमा सिर्जना गरिएको हो। एकचोटि तपाईंले यो सिर्जना र डाउनलोड गरिसकेपछि, तपाईं यसलाई जो कोहीसँग साझा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं जुन मन पराउनुहुन्छ तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्दछ।
हो, तपाईंले यसलाई पढ्नु भएको रूपमा, WhatsApp ले पनि हामीलाई GIF सिर्जना गर्न द्रुत र सजिलो तरीका प्रदान गर्दछ भिडियोबाट हाम्रा सम्पर्कहरूसँग साझेदारी गर्न।
प्रक्रियाको एक पाटो हुन्छ, यद्यपि हामीले यो प्रणालीको मुख्य सीमितता थाहा पाउनुपर्दछ: हामीले GIF मा रूपान्तरण गर्न चाहेको भिडियो हुनुपर्दछ। अधिकतम seconds सेकेन्ड। यसको मतलब यो होइन कि हामी लामो भिडियोहरू प्रयोग गर्न सक्दैनौं, तर हामीले त्यसलाई6सेकेन्डमा कम गर्नुपर्नेछ।
हामीले भर्खर हामीले कन्भर्ट गर्न चाहेको भिडियो छनौट गर्नुपर्नेछ, र उही चरणहरू प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ जस्तो कि हामी यसलाई सिधै हाम्रा सम्पर्कहरू वा समूहहरूमा पठाउने हो। केवल सतर्कता त्यो हो, पूर्वावलोकनमा, जस्तो कि तपाईंले माथिको छविमा देख्नु हुनेछ, हामीले गर्नु पर्छ माथिको दायाँ कुनामा चयनकर्तामा GIF विकल्प चयन गर्नुहोस्। यस तरिकाबाट, तपाईं सजिलैसँग GIF को रूपमा भिडियो पठाउन सक्नुहुनेछ।
टेलिग्राममा हामीसँग यसको सम्भावना पनि छ हामी GIF मा पठाउन चाहान्छौं कुनै पनि भिडियो रूपान्तरण गर्नुहोस् एनिमेटेड यद्यपि यहाँ फरक छ हामीसँग भिडियोको आकारमा सीमा छैन, त्यसैले हामी रूपान्तरण गर्न सक्दछौं हामीसँग रेकर्ड गरिएको कुनै पनि भिडियोसँग वा हामीसँग हाम्रो उपकरणमा छ।
WhatsApp मा जस्तै नै, हामी बस गर्न पर्छ स्पिकरको आकारमा सानो बटन थिच्नुहोस् भिडियो पूर्वावलोकनको माथिल्लो बायाँ कुनामा। यस तरिकाले, हामी सूचना प्राप्त गर्नेछौं कि यसलाई आवाज बिना नै पठाउदा, GIF को रूपमा लुप हुनेछ, तपाईं माथिको छविमा हेर्दै हुनुहुन्छ। कुनै श doubt्का बिना, तिनीहरू छन् एनिमेटेड GIF मा भिडियो रूपान्तरण गर्न सब भन्दा सजिलो तरिकाहरू।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » कसरी GIF मा भिडियो रूपान्तरण गर्ने
सामसुले K के क्यूएलईडी प्रक्षेपण गर्दछ, दीवाल र K के एचडीआर प्रविधि संग